Waa Kuma Jamaal Cali Xuseen? Taariikh Koobaan 2aad | Hangool News
Waa Kuma Jamaal Cali Xuseen? Taariikh Koobaan 2aad
Hangoolnews:— Jamaal waxa uu sanadadii 1980-naadkii horaantiisii mar ahaan jirey xiddig ka dhex ifaayey fagaarayaasha Kubbadda Tennista ee dalkii Soomaaliya. Saddex goor ayuu hantay horyaalnimada keli-kelida (Singles title) oo uu kaalinta koowaad ee kubbaddaasi tartankii ciyaarihii gobollada ee dalkii Soomaaliya oo dhan uu kaalinta koowaad ka galay saddex sanadood oo isku xiggay. Jamaal aad ayuu u da’yaraa una safnaa Goboladdii Waqooyi Galbeed ee Hargeysa, iyo Tog-dheer, xilliggii ugu horeysay ee uu koobka qaadayna waxa ay da’diisu ahayd 16 jir. Jamaal markii danbe wuxuu ku biiray ciyaarihii heerkii koowaad ee dalkii Soomaaliya. Isagoo noqday ciyaartoy mushahar lagu siiyo ciyaarta (professional player) isagoo u safan jiray naadigii Badda ee ka dhisnaa magaaladda Muqdisho.
Jamaal Cali Xuseen waa qoraa (writer) ah oo wax ku qora luqaddaha Af Ingiriisiga iyo Soomaaligaba. Jamaal Cali Xuseen sidoo kale waa Abwaan, hal-abuur tixda iyo tiraabtaba curiya oo leh suugaan faro baddan oo uu isagu sameeyay. Jamaal Cali Xuseen waxaa qaayihiisa laga dhex hilaadin karaa horumarkiisa qofnimo ee uu ku tallaabsaday maanta iyo hormuudnimadiisa la-higsadenimo ee uu ku mutaystay inuu noqdo madaxa Banki ka mid ah kuwa caalamka ugu weyn qaybahiisa wadamo waaweeyn oo ka mid ah caalamka; iyo musharaxnimadda uu ka gaadhay siyaasadda Somaliland isagoo wakhtigga uu ku jiray ay yar tahay.
Jamaal Cali Xuseen shakhsiyan waxa uu kaalin mug leh ka soo cayaaray dibu-dhiskii iyo horumarintii dalka, siiba badhitaaridda dhismayaasha dugsiyada waxbarashada, gunnaynta macallimiinta iyo taakulaynta ardayda xagga dhaqaalaha oo uu bil walba jeebkiisa ka bixinaayey muddo 15 sanadood ah. Waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka tiradda yare e Iskuul dhan keligood dhisay isagoo dugsi hoose/dhexe maal geliyey oo ka dhisay magaaladda Burco kaasoo manta ay ka soo baxeen arday tiro badani. Jamaal Cali Xuseen wuxuu ku faani karaa inuu yahay siyaasigga qudha ee arday dibadda u diray oo jeebkiisa ka bixiyey iyagoo ay qaarkood noqdeen Dhakhaatiir dalka dibadiisa wax ku soo baratay oo manta ka hawl gala dalka gudahiisa. Waxaa muhiim ah in aanu Jamaal ardaydaasi u eegin reerkoodda ee ay tartan u galeen; markuu ka bixinaayeyna aanu garaneynin qabyaalad ahaan haybta ay ka soo jeedeen. Maaha ciyaar in qof aanad garaneynin inuu 5 sanadood oo Jaamacad Dhakhtarnimo ah kaa bixiyo.
Inkastoo uu Jamaal Cali Xuseen waddanka dibadiisa ka shaqeeynaayey, waa shakhsi u dhuun daloola waddanka kaalin mug lehna ka soo qaatay dibu dhiskii qarankan Somaliland ilaa maalintii lagu dhawaaqay 1991kii. Jamaal Cali Xuseen wuxuu ka mid yahay asaasayaashii ururkii Somaliland Forum ee mashaariicda tiradda badan ee horumarineed ka fuliyey Somaliland, marna wuxuu ahaa gudoomiyahii Ururka Somaliland Forum. Ururkani wuxuu fuliyey mashaariic badan oo lagu taageerayo bulshadda reer Somaliland min Galbeed ilaa Barrio kuwaasoo kala khuseeyey dhinaca Caafimaadka, Waxbarashadda, horumarinta qadiyadda Somaliland, Ciyaaraha ama Sportska, iyo Maamul wanaaga Iwm. Gaar ahaan waxa Ururkan Somaliland aad loogu xasuustaa in ay keeneen khubaraddii dibadda laga keenay ee sugaayey berigii loo codeeynaayey dastuurka Somaliland. Wixii ku baxay maaliyad khubaradaasina waxa dhabarka u ritay Ururka Somaliland Forum, taasina waxa ay door weyn ka ciyaartay ansixiddii Dastuurka Somaliland.
Jamaal Cali Xuseen xilliyaddii fasaxyadiisa waxa uu Jaamacadaha dalka u jeedinaayey qudbaddo ku saabsan aqoonta iyo nolosha isaggoo cabiraayey hibadiisa hal-abuurnimo iyo cabbirkiisa qofnimo ee carinta maskaxeed. Jamaal waa shakhsi ka soo mudh baxay heer caalamiya waaya arragnimo balaadhan iyo saaxiibo culus oo madaxda adduunka ah ku leh dunida daafaheeda. Waxa kale oo uu xidhiidh balaadhan la leeyahay oo aad ugu dhex caan yahay dhalinyarada reer Somaliland. Jamaal Cali Xuseen wuxuu siyaasadda dhadhamiyey halgankii dhagax-tuurka ee ardayda magaaladda Hargeysa bilaabmay sanadkii 1982kii oo uu arday Form 3 ah ka ahaa dugisaga sare ee Faarax Oomaar. Halgankaasi oo sababay in markii danbe ay dadku kacaan oo si toos ahna uga hor yimaadaan dawladdii Siyaad Barre hogaaminaayey. Halgankaana waxaa bilaabay markii xaqdarro lagu xidhxidhay dhalinyaraddii UFO ee iyagu bulshadda u shaqeeynaayey.
Jamaal Cali Xuseen marnaba siyaasadda dalka kamuu maqneyn oo wuxuu ka mid ahaa dadkii caawinaayey madaxda Somaliland marka ay doonayaan in ay madaxda caalamka la kulmaan. Jamaal Cali Xuseen gurigiisii magaaladda Nairobi wuxuu saldhig u ahaa dadka reer Somaliland, wuxuuna noqday goobta laga fidiyo qadiyadda Somaliland intii aynaan ku yeelan wakiilo iyo safaaraddo dalkaasi. Jamaal Cali Xuseen wuxuu maqaalo faro badan si badheedh ah ugu qoray af Ingiriisi, waxayna ku soo baxeen jariiraddo badan oo caalamka ah gaar ahaan geeska Africa isagoo mar walba iibinaayey qadiyadda Somaliland.
Haddaba waxa uu siyaasadda toos u soo galay sanadkii 2011 kii isagoo ka mid ahaa xisbiggii UDUB. Markii khilaafkii UDUB uu cirka isku shareerayna wuxuu garabkiisii Isbahaysi la galay Xisbiggii UCID oo qudhiisu khilaaf ka soo baxay. Halkaas oo ay ku sameeyeen Isbahaysi cusub oo loogu magac daray NEW UCID. Kalfadhigii 5 aad ee Golaha Dhexe ee Xisbigga UCID waxa uu October 28keedii, 2012 kii uu Jamal Cali Xuseen cod aqbaliyad ah ugu doortay inuu u noqdo murashaxa rasmiga ah ee jaggadda madaxweynaha ee doorashadda soo socota March 2017, haddii Ilaaha Awooda lihi uu ka yeello. Guntii iyo gebogebaddii; Jamaal Cali Xuseen waayo aragnimadii balaadhneyd ee uu helay in ka badan 25 sanadood oo uu caalamka ka shaqeeynaayey wuxuu helay khibraddo qoto dheer oo ay ka mid yihiin sida loo maamulo bankiyadda, sida loo maamulo warshadaha Sibidhka iyo laydhka, sida loo maamulo Dhaqaalaha guud ahaan loona kobciyo, sida caafimaadku u shaqeeyo loona maamuli karo, sida xidhiidhka caalamiga ahi u shaqeeyo saaxiibana looga kasbaddo caalamka, sida waddamadda loogu raadiyo maal-gelinta, sida kaabayaasha dhaqaalle loo hirgelin karo, sida loo maal geliyo dekadaha, wadooyinka, warshadaha, iyo baayac-mushteriga, sida ay u shaqayso waxbarashadda saxa ahi, sida dadkeena maskaxdooda iyo xirfadooda loo kobcin karo, sida ay hay’adaha dawliga ahi u shaqeyn karaan oo loo hubin lahaa, iyo sida loo hirgelin lahaa hanti-dhowr dalka ka shaqeeya.
Haddaba maanta Jamaal Cali Xuseen, mar kale, waa isir ka dhex muuqda nolosha oo door ka cayaaraya heerar caalami ah iyo kuwa goboleedba waana Murashaxa Jagadda Madaxweynaha ee Xisbigga Cadaaladda iyo Daryeelka ee UCID doorashadda soo socota. Dhamaad